ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လက်ပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသက်ရှင်နိုင်လဲ? - Zet Star
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လက်ပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသက်ရှင်နိုင်လဲ?
ဒါအရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခဏခဏ မေးကြတဲ့ မေးခွန်းပါ။ လက်ပေါ်မှာ ဘယ်လောက် ကြာကြာ အသက်ရှင်သလဲသိမှ ရောဂါ ဘယ်လို ကူးလွယ်သလဲ သိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ခြောက်တန်းတုန်းက ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ Microbes hunters ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုသွားသတိရပါတယ်။ မိုက်ခရိုစကုပ်ကို စထွင်ခဲ့ကာ ရောဂါပိုးကိုပထမဆုံးစတွေ့ခဲ့တဲ့ Leeuwenhoek တို့၊ Spallanzani တို့သာရှိရင် ကျိန်းသေကိုယ့်အသားပေါ်ကိုယ်တင်ပြီးစမ်းသပ်ကြမှာပါ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် SARS-CoV-2 ဟာ လက်ပေါ်မှာ ( ၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိ ) အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အတွက် ရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ လက်နဲ့ထိတွေ့ခဲ့ အဲ့ဒီလောက်ကြာကြာထိတွေ့ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာ အများကြီးပါ။ ကျနော်တို့လက်ပေါ်ပါလာရင်၊ အရေပြားပေါ်ကပ်ပါလာရင် (၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိ) အသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ လက်ကိုမကြာခနဆေးဖို့ကအရေးကြီးလာပါပြီ။
အရေးကြီးတာက အဲ့ဒီသုသေသနမှာ လက်ကို အီသနော 80% ပါတဲ့ hand sanitizer နဲ့ ပိုးသန့်စင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ၁၅ စက္ကန့်အတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်တွေ သေကုန်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ လက်ကိုဆပ်ပြာ (သို့မဟုတ်) အယ်ကိုဟော 60% ပါတဲ့ hand sanitizer နဲ့ အနည်းဆုံး ၂၀ စက္ကန့်မကြာခဏ ဆေးပေးခြင်းဟာ ထိရောက်သောကာကွယ်မှုတစ်ခုဆိုတာ ပိုပြီးသေချာလာပါတယ်။
ဒီစမ်းသပ်မှုမှာ ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပမာဏကို ထည့်မစဉ်းစားပဲ #ရောဂါပိုးရဲ့အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုပဲ အဓိကသုသေသနပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သုသေသနပြုခဲ့တာလည်း နမူနာ ၃ ခုပဲသုံးခဲ့တာမို့ စမ်းသပ်မှုအရွယ်အစားက သေးပါတယ်။
နောက်တခုက အခုလို forensic autopsy ကရယူတဲ့ လူ့အရေပြားနဲ့ သက်ရှိလူရဲ့ လက်ပေါ်တင်ကြည့်တာက ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Mask တပ်ခြင်းနဲ့ #လက်ကိုမကြာခနအသေအချာဆေးခြင်းဟာလိုကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာ ထပ်မံ၍အသိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
← ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲက မုန်တိုင်းရဲ့ သက်ရောက်နိုင်မှုတွေကို မိုးလေဝသပညာရှင် ဦးချစ်ကျော် ပြောပြီ
ဒီလို မြင်ကွင်းမျိုးကို ထပ်ပြီး မမြင်မတွေ့ရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရင်း (ငိုချလိုက်ပါ ညီမလေးရယ်..) →